Igbo, John: Lesson 022 - Ndị mmadụ na-adabere n'ebe Jizọs nọ (Jọn 2:23-25) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 022 (People lean towards Jesus; Need for a new birth)
a) Ndị mmadụ na-adabere n'ebe Jizọs nọ (Jọn 2:23-25)
23 Ma mb͕e Ọ nọ na Jerusalem n'ememe ngabiga, n'ememe ahu, ọtutu madu kwere n'aha-Ya, nāhu ihe-iriba-ama-Ya nile nke Ọ nēme. 24 Ma Jisus onwe-ya araraghi Onwe-ya nye n'aka-ha na ntukwasi-obi, n'ihi na Ọ mara madu nile, 25 a n'ihi na ọ dighi Ya nkpà ka onye ọ bula b͕ara madu àmà; n'ihi na ya onwe-ya mara ihe di nime madu.
Mgbe ìgwè mmadụ Ememme Ngabiga bịara Jeruselem, ha nọ na-efe efe. Ha na-eche banyere Nwa Atụrụ ahụ nke chebere ndị nna nna ha site na ikpe Chineke tupu ha esi n'Ijipt pụta, n'ihi ya, ha na-esonyere anụ anụ n'àjà ha.
Jizọs, Nwa Atụrụ Chineke họpụtara, bịara Jerusalem ma rụọ ọtụtụ ihe ịrịba ama, na-egosipụta ịhụnanya na ike ya. Mgbe nke a gasịrị, ọ bịara mara ìgwè mmadụ ahụ na aha ya dị ọtụtụ n'egbugbere ọnụ; ha nēkwu okwu, si, Ọ bu onye-amuma, ma-ọbu na Elaija bu onye-isi, ma-ọbu na ọ bu Kraist ahu? Ọtụtụ ndị dọtara ya n'ebe ọ nọ ma kwenyere nà o si na Chineke bịa.
Jizọs hụrụ n'ime obi ha, ma ọ họrọghị onye ọ bụla maka ịbụ onye na-eso ụzọ. Ha amabeghị chi ya, mana ha na-eche echiche nke ụwa. Na uche ha bụ nnwere onwe site n'aka Rom, ọrụ ndị kwesịrị ekwesị na ọdịnihu dị mma. Jizọs maara mmadụ niile; ọ dịghị obi zoro ya n'anya. Ọ dịghị onye chọrọ Chineke n'eziokwu. A sị na ha ji ezi obi chọọ Chineke, ha gaara eme baptizim na Jọdan, chegharịa ma kwupụta mmehie ha.
Kraịst maara obi gị, echiche gị, ekpere gị na mmehie gị. Ọ maara echiche gị na isi mmalite ha. Ọ ghọtara na ịchọrọ maka ndụ nke omume na ezi omume. Olee mgbe a ga-eme ka nganga gị maa jijiji? Olee mgbe ị ga-agbakụta ùgwù nke onwe gị, iji jupụta na Mmụọ Nsọ?
1 Ma otù nwoke nime ndi-Farisi di aha-ya bu Nikọdimọs, onye-ndú ndi-Ju. 2 Onye ahu biakutere Ya n'abali, si Ya, Rabai, ayi matara na I bu onye-ozizí Nke siworo n'ebe Chineke nọ bia: n'ihi na ọ dighi onye ọ bula puru ime ihe-iriba-ama ndia nke Gi onwe-gi nēme, ma ọ buru na Chineke anọyeghi Ya. , 3 Jizos zara ya, ‘’N'ezie, asim unu, ọ buru na amughi madu obula, ya apughi ihu ala-eze Chineke.’’
N'etiti ìgwè mmadụ ahụ, a kpọrọ otu onye a na-akpọ Nikọdimọs, bụ onye dị nsọ ma bụrụ onye a ma ama, otu n'ime mmadụ iri asaa na Sanhedrin. Enye ama ọfiọk odudu Abasi emi odude ke Christ. Eleghi anya ochoro ime ka odi n'etiti onyeam ma ozona nzuko ndi Juu. N'otu oge ahụ ọ na-atụ egwu nnukwu onye nchụàjà na ndị nkịtị. O doro anya banyere onye nke Jizos, ya mere, ọ biakutere Jizọs na nzuzo na ọchịchịrị, na-achọ ịnwale Jizọs tupu ya etinye ya gburugburu.
Site n'igosi akwukwo "onye nkuzi" aha, Nikọdimọs n'egosiputa otutu madu, ndi huru Kraist dika onye ji akwukwo ndi nkuzi ya. O kwetara na Jizọs si n'aka Chineke zite ya, ihe ịrịba ama gosiri ya. Ọ kwupụtara, "Anyị kwenyere na Chineke nọnyeere gị ma na-akwado gị." Ị ga-abụ Mesaịa? " Nke a bụ nkwenye zuru oke.
Jizọs zara ajụjụ ya, ọ bụghị ịdabere kpamkpam na nke a site na ndị ndú nke ndị mmadụ na Kraịst. Ọ hụrụ n'ime obi Nikọdimọs, mmehie ya na ọchịchọ ya maka ezi omume. O nwere ike inyere ya aka mgbe o gosipụtara ìsì ime mmụọ ya. N'agbanyeghị na Nikọdimọs dị nsọ, ọ maghị Chineke n'ezie. Jizos gwara ya okwu n'ezo ya, si, "N'ezie, odigh onye puru imata Chineke site n'olu nke aka ya, oburu na odi ndu nke Mo Nso."
Nkwupụta a bụ ikpe Kraịst banyere ọmụmụ banyere ọmụmụ banyere okpukpe na nkịta ndị dabeere na ntụgharị naanị. N'ihi na ihe omuma banyere Chineke abughi site na ntughari uche, kama site na omumu ohuru. N'elu redio, n'adịghị ka TV, ị nwere ike ịgbanye kuki dị ka ị chọrọ, ma ị pụghị inweta ihe ọ bụla. Foto dị iche iche chọrọ otu nke dị iche na redio. Ya mere, onye okike, n'agbanyeghi nrube isi ya na omume ya apugh ihu Chineke site n'echiche ma obu obi. Nghọta ime mmụọ a chọrọ mgbanwe, ịmụ eluigwe na ihe e kere eke ọhụrụ.
4 Nikọdimọs we si ya, ‘’Asi aṅa pu ime madu mb͕e o mere agadi? Ọ puru ibà n'afọ nne-ya nke ub͕ò abua, mua kwa ya?’’ 5 Jizos zara, si, ‘’N'ezie asim i, Ọ buru na amughi madu site na miri na mọ, ọ pughi ibà n'ala-eze Chineke.’’
Azịza Kraịst nke gosiri na amaghị Chineke banyere Nicodemọs kpughere ya. Ọ nụbeghị banyere ọmụmụ nke abụọ. Mgbe ọ nụrụ ihe a, o juru ya anya site na aro na agadi nwoke nwere ike ịlaghachi n'ime akpa nwa. Nzaghachi a dabere na ahụmahụ ọhụụ na-egosi ụzọ dị mkpirikpi. Ọ ghọtaghị na Chineke bụ Nna nwere ike mụọ ụmụ site na Mmụọ Ya.
Jizọs hụrụ Nikọdimọs n'anya; mgbe o dugaworo ya ikwuputa na ya amaghi uzo nke ala eze Chineke, o mesiri ike n'eziokwu site n'igosi na obu eziokwu. Anyị ga-ekwenye na anyị apụghị ịbanye n'Alaeze ahụ n'enweghị nwa nke abụọ, ọnọdụ naanị ya.
Kedu ihe bụ ọmụmụ nke abụọ? Ọ bụ ọmụmụ, ọ bụghị naanị echiche, ma ọ bụ ọ na-esite ná mgbalị ụmụ mmadụ, ebe ọ bụ na ọ dịghị onye nwere ike ịmụ nwa; Chineke na-aghọ nne ma na-enye ndụ. Ọmụmụ ime mmụọ a bụ site na amara, ọ bụghị nanị ngbanwe nke agwa, ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị mmadụ. Mmadu nile ka amuworo n'ime nmehie ma n'enwegh olile anya maka imeziwanye. Omumu ime mmuo bu nbata nke ndu Chineke n'ime madu.
Kedu ka nke a si eme? Jizọs gwara Nikọdimọs, ọ bụ mmiri na Mmụọ Nsọ na-enweta ya. Mmiri na-ekwu maka baptism John na ọkwa ite ọcha na agbamakwụkwọ ahụ. NdŽ nke Ogbugba Ochie ah h ta na] dŽ mkpà mmiri nime ablutions nke b iheaka nke imechacha mmehie. Dị ka a ga-asị na Jisọs na-asị, "Gịnị mere na ị gaghị agbada Baptist, kwupụta mmehie gị ma bụrụ onye e mere baptizim?" Ebe ozo Jisos siri, "oburu na onye obula choro n'azu, ya gua onwe ya, buru obe ya ma bia n'azu m." Nwanna kwupụtara nkwenye gị, kweta ikpe Chineke maka nmehie gị. Ị na-emerụ ma na-ala n'iyi.
Jizos abugh nani na baptism nke baptism na ngbaghara nmehie, ma o ji Mo Nso me baptism nke ndi nadigh obi, naputa ndu ohuru nime ndi obi gbawara. Mgbe a kpọgidere ya n'obe, anyị na-amụta na imecha akọ na uche anyị bụ ọbara ya dị oké ọnụ ahịa. Ime nke a n'ime onye na-echeghari site na Mmiri.Mgbe mmadụ na-erubere ọrụ nke Mmụọ Nsọ, o jupụtara na ndụ ebighi ebi na mkpụrụ ya na àgwà ya, wee ghọọ ezi mmadụ dịka nduzi Kraist. Ihe mmepe a anaghị eme na mberede, kama ọ dị mkpa oge; dị ka nwa ebu n'afọ na-ewe oge iji zụlite n'afọ nwa tupu a mụọ ya. Nke a bụ otú ọmụmụ nke abụọ si eme ma ghọọ onye eziokwu na onye kwere ekwe, onye maara n'ezie na a mụrụ ya ọzọ nakwa na Chineke bụ nna ya nakwa na o nwere ndụ ebighị ebi site na Kraịst.
Jizọs mere nke a nzube nke nkwusa ya, isiokwu nke Alaeze Chineke. Ntre nso idi Obio Ubọn̄ emi? Ọ bụghị òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ma ọ bụ usoro akụnụba ọ bụla, mana mmekọrịta nke nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Mmụọ a gọziri agọzi na-abịakwasị ha, ka ha na-edo onwe ha n'okpuru Kraịst, ma kwenye na ọ bụ Onyenwe ha na Eze ka e rube isi.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, na-ekele gị maka ọbịbịa m site na amara naanị. I meghewo m anya ime mmụọ. Ka m nọgide na ịhụnanya gị. Meghee anya nke ndi choro gi n'eziokwu, ka ha mara nmehie ha ma kwuputa ha, ka eme ka ha di ike site na ike nke Mo Nso gi, na-adakwasi na obara gi a wusiri, ka ha wee banye n'udo n'udo.
Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti nsọpụrụ nke Nikọdimọs na nzube nke Kraịst?